प्रधानमन्त्री केपि ओलिको पक्षमा बहुमत पुगेपछी माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड त,नावमा…हेर्नुहोस!
सत्तारुढ दल नेकपाभित्र स,मिकरण परिवर्तन भएसँगै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सचिवालयमा बहुमत जु,टाउन सफल हुनुभएको छ । एक महिनादेखि जारी नेकपाभित्रको वि,वाद स,माधान गर्न भन्दै उपाध्यक्ष वामदेव
गौतमले छ बुँदे सहमतिको खाका अगाडि सारेसँगै ओली बहुमतमा पुग्नुभएको छ । सचिवालयमा अल्पमतमा रहनुभएका ओलीलाई पछिल्लो सयममा उपाध्यक्ष गौतम र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले साथ दिएपछि ओली थप बलियो हुनुभएको छ ।
ओलीको पक्षमा उपाध्यक्ष गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल, सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा उभिएका छन् । नौ सदस्यीय सचिवालयमा ओली ब,हुमतमा पुगेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र
वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल त,नाबमा पर्नुभएको छ । नौ सदस्यीय सचिवालय ओली नेपालको पक्षमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ रहनुभएको छ ।
वामदेव गौतमको आ,डमा प्रचण्ड नेपालले ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मध्ये एक पद कुनै पनि हा,लतमा छो,डन द,बाब दिएका थिए । तर गौतमको युर्टन भएसँगै प्रचण्ड नेपाल पक्ष ह,च्चिकिएका छन् ।
ओली र प्रचण्डबीच ओलीले सरकारको ने,तृत्व गर्ने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको जि,म्मेवारी लिएर पार्टी सञ्चालन गर्ने यसअघि नै सम्झौता भएपनि वरिष्ठ नेता नेपालको अ,सन्तुष्टिको कारण वि,वाद सुल्झिन नसकेको खबर आजको समाचार पत्रले उल्लेख गरेको छ ।
Previous नेकपामा शक्ति सं घर्ष : ओली र दाहालबीच संवाद नै टुट्यो…हेर्नुहोस!
Next पुन शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति बनेमा काङ्ग्रेस पार्टी स,माप्त हुन्छ : सुजाता कोइराला…हेर्नुहोस!